#Atomicchat: Umxholo oveliswe ngumsebenzisi | Martech Zone
Ukuba u landela kwi-Twitter, Sibe neseshoni yengxoxo emnandi nabantu kwiAtomic Reach bethetha ngomxholo oveliswe ngumsebenzisi (UGC). Nazi izinto eziphambili kunye nokususa okuphambili Ingxoxo ye #AtomicChat ye-Twitter, iindwendwe qho ngoMvulo ebusuku nge-9pm EST / 8pm CST / 6pm PST. Landela @Atomic_Fikelela Lonke uhlaziyo lwakho lomxholo wentengiso!
Mfutshane umxholo owenziwe ngumsebenzisi, I-UGC ligama elisetyenziselwa ukuchaza naluphi na uhlobo lomxholo njengevidiyo, iibhloko, iifom zengxoxo, imifanekiso yedijithali, iifayile zeaudiyo, kunye nezinye iindlela zosasazo ezenziwa ngabasebenzisi okanye abasebenzisi bokugqibela benkqubo ye-intanethi okanye inkonzo kwaye ifumaneka esidlangalaleni kwabanye abathengi kunye nabasebenzisi bokugqibela. Umxholo owenziwe ngumsebenzisi ukwabizwa ngokuba yimithombo yeendaba eyenziwe ngabathengi (CGM). IWebopedia
Enkosi Ku Ukufikelela kwiatom elinye ithuba elihle!
tags: ukufikelela kwiatomyitshydouglas karrdouglaskarringxoxo ye-tweetTwitterIngxoxo ye-twitterugcUmxholo oveliswe ngumsebenzisi